Waa Haaweney 108 Sano jir oo Qof walbo kula talineysa in uu istalaalo kadib Markii la talaalay Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaWaa Haaweney 108 Sano jir oo Qof walbo kula talineysa in uu istalaalo kadib Markii la talaalay
February 25, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Haweeney 108 sano jir ah oo iswiidhish ah ayaa heshay qiyaasta ugu horreysa ee tallaalka Corona, sidaa darteedna waxay noqotay dadkii ugu horreeyay ee magaaladeeda, ee hela daryeelka guriga, ee laga tallaalo Covid-19.
“Waan la yaabay markii la ii sheegay in la gaadhay waqtigii … Waxaan u maleynayay inay layaab ku noqotay inay yeeshaan aragti dheer oo ah inay weydiiyaan waayeelka inay doonayaan inay talaalaan iyo in kale,” ayay tiri gabadha la yiraahdo Danny Colson,.
Iyada oo gacan ka heleysa saaxiibkeed, Danny ayaa aaday xarunta caafimaadka, si ay u qaadato tallaalka, shaqaalaha caafimaadka ayaa ka codsaday in ay inyar ku sii sugnaato xarunta si loola socdo wixii waxyeelo ah, ee aan iyada ku soo muuqan.
Markii ay weydiisay warbaahinta Aftonbladet , waxay dooneyso inay u sheegto dadka dareemaya inay ka labalabeyn karaan tallaalka? Waxay ku jawaabtay:
Waxay buun-buuninayaan halista jirta… waa uun wax yar oo aad si dhib yar u dareemi doonto.
Waxay ku boorisay kuwa diidan inay is tallaalaan, iyadoo leh, “Waa doqonnimo weyn inaan la qaadan maxaa yeelay ma ogid waxa kugu dhici doona haddii aadan tallaalin … Waa inaad ku mahdisaa in tallaalku jiro oo aad is tallaasho. “
Waxayna xaqiijisay inaysan wax dhibaato caafimaad ah kala kulmin kadib markay qaadatay tallaalka.
Waxaa loo qorsheeyay in lagu tallaalo qiyaasta labaad badhtamaha Maarso.